सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनमा पनि उस्तै जटिलता, माधवलाई ८ सांसद अपुग ! खबरमञ्च
२४ फागुन, खबरमञ्च, at 7:35 AM
By खबर मञ्च / March 8, 2021 / Comments Off on सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनमा पनि उस्तै जटिलता, माधवलाई ८ सांसद अपुग !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाले कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेको थियो । उनीहरुले पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन् । तर, पुनरावलोकनमा समेत आफ्नै जटिलता छन् । निर्वाचन आयोग नै पुनरावलोकनमा जाने हो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो पुनरावलोकनबाट आउने फैसला दाहाल–नेपालको पक्षमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।